अहिले देशमा ‘मेरो सरकार’ छ । यो कुरा मैले भनिरहनु पर्दैन, सम्माननीय राष्ट्रपतिले नै भन्नुभएको कुरा मैले सम्झेको मात्रै हो । पुरै दुई तिहाईको ‘मेरो सरकार’ किन–किन मलाई त्यति शक्तिशाली चाहिँ लाग्दैन । तर, म चाहन्छु- मेरो सरकारलाई कसैले कमजोर बनाउन नखोजोस् । सरकार कमजोर भयो भन्ने विपक्षीको कुरा सुन्दा म आफु पनि कमजोर भैरहेको छु जस्तो लाग्छ ।
संसारबाटै कम्युनिष्ट सत्ता लोप हुँदै गएको अवस्थामा नेपालमा कम्युनिष्ट नेताको नेतृत्वमा ‘मेरो सरकार’ छ । अनि कम्युनिष्ट नामका धेरै पार्टी र मार्क्स, लेनिन, माओका धेरै अनुयायी नेता कार्यकर्ता पनि हाम्रै देशमा छन् । यो कुराले मलाई फेरि कता–कता शक्तिशाली नै छु जस्तो पनि लाग्छ ।
यी सबै कुरालाई छाडेर अहिले मलाई एकदमै चिन्ता लागेको बिषय चाहिँ के हो भने अर्जुन क्षेत्री भन्ने एउटा सानो भाइ र विप्लव भन्ने एउटा सानो समूहसँग मैले शक्तिशाली ठानेको ‘मेरो सरकार’ भयंकर त्रसित छ । दुई ठूला पार्टी मिलेर बनेको अनि केपि शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जस्ता शक्तिशाली अध्यक्ष भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), ओली नेतृत्वको सरकार, सयौं नेता, हजारौं कार्यकर्ता अनि लाखौं मतदाताको साथमा सेना, जनपद प्रहरी, सशस्त्र सबै साथमा हुँदा पनि ‘मेरो सरकार’ अर्जुन क्षेत्री र विप्लवसँग किन थर्कमान हुनु परेको होला ? यो अचम्मको कुरा छ ।
१० बर्ष जनयुद्ध गरेर आएका कमरेड प्रचण्ड र १४ बर्ष जेल बसेर आएका कमरेड केपीले नेतृत्व गरेको सरकार र पार्टी त पावरफुल हुनुपर्ने हो । राजधानीमा २/४ थान बम पड्किँदैमा वा ज्योतिषले पानी पर्छ, हावा चल्छ, बाढी आउँछ, भूकम्प पनि जान सक्छ भन्दा किन आत्तिएर तीनलाई च्याप्प पारेको होला । तीनले बोल्दैमा ‘मेरो सरकार’ किन यति थर्कमान भएको होला !
गाउँमा मेला महोत्सव लाग्दा पनि लौ विप्लवका मान्छे आए भनेर चिच्याएकै छ, युट्यूब च्यानलमा कुनै बालकले बकवक गर्दा पनि हायलकायल भएकै छ । अनि ज्ञानेन्द्र शाही, रवि लामिछाने, सुरेन्द्र केसी, खगेन्द्र संग्रौलाहरु बोले भने पनि लौन बर्बाद हुन लाग्यो भने जसरी ‘मेरो सरकार’ आत्तिन थालेको छ किन होला ?
विप्लवको शक्ति कति छ भन्ने सरकारले नापजाँच गरेकै होला ! अर्जुन क्षेत्री को हो ? कहाँ बस्छ ? के बोल्छ ? भन्ने पनि सरकारी संयन्त्रलाई जानकारी भएकै हुनुपर्छ । मिडियालाई नियन्त्रण गर्न त्यत्रो गुपचुप विधेयक बनाएर एकैचोटी संसदमा लैजान खोज्ने सरकारका मान्छेलाई अर्जुन क्षेत्री वा विप्लवको त्रास किन बारम्बार हुन्छ होला !
कमरेड प्रचण्डलाई त थाहा छ नि, हिजो जनयुद्धका बेला तात्कालीन शाही नेपाली सेनालाई हामीले ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद अनि भारतिय विस्तारवादको योजनामा हत्यारा ज्ञानेन्द्रको जुठोपुरो खाएर हामी विरुद्ध लड्न पठाएको’ भनेर सत्तोसराप गर्थ्यौं नि होईन र !
के अहिले हामी त्यस्तै भाषा प्रयोग गर्छौं त ? त्यतिबेला त्यस्तै प्रोपोगाण्डा आवश्यक थियो । तर आज विप्लवविरुद्ध प्रोपोगण्डा चलाउन आवश्यक नै छैन नी होईन र ? विप्लव को हुन् वा उनको शक्ति कति छ ? अनि उनको लडाई राजनीतिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि हो की हिजोको युद्धको धङ्गधगी मात्रै हो भन्ने जनताले नै प्रष्ट बुझिसकेका छन् । त्यसैले विप्लव वा उनको शक्तिसँग डराउने र प्रतिबन्ध लगाउने भन्दा पनि उनका मागलाई सिरियस भएर सुनिदिने पो हो की !
अनि अर्जुन क्षेत्रीलाई पक्रेर प्रहरीकोमा राख्दा भन्दा यस्तो नबोल बाबु भनेर मायाले सम्झाउँदा पो ‘मेरो सरकार’ को मान र शान बढ्छ होला त !
ज्योतिषको नाममा आएका अर्जुन क्षेत्रीसँग म पनि सहमत छैन । उनले गरेका बेतुकका कुराले कहिलेकाँही मेरो पनि कन्सिरी रनक्क तात्छ । उनले गरीखाने मेसो सायद त्यहि भएर होला अनि उनका कुरा पत्याईदिनेहरु भएर पनि त होला उनले बकबक गर्न पाईराखेको । यसमा उनको मात्रै दोष पनि म देख्दिनँ । उनका कुरा पत्याईदिने, उनले बोलेका कुरालाई सामाजिक संजालमा राखेर हौवा फैलाउने अनि लाईक र शेयर गरेर बढवा दिने काम समाजका अन्य पात्रले पनि गरिरहेका छन् ।
त्यसमाथि ‘मेरो सरकार’ले त झन् अर्जुन क्षेत्री भन्ने पात्रलाई समात्न लगाएर अनावश्यक स्थान दिइरहेको छ । एक पटक सोचौं त यो गलत भयो कि ! अनावश्यक कुरा बोलेर जनतालाई त्रसित बनाएको भन्ने आरोपमा उनलाई समातेको हो भने त झन् अन्याय भयो । यहाँ २५ बर्षदेखि देशलाई सिंगापुर बनाउँछु, स्विजरलैण्ड बनाउँछु भनेर सँधै आस देखाउने, पेट्रोलको कुवा खन्छु, पानी जहाज र रेल कुदाउँछु भनेर हैरान पार्नेलाई त हामीले कहिल्यै नराम्रो भनेका छैनौं ! अनावश्यक सपना देखाएर दिनदिनै जनतालाई ब्ल्याकमेलिङ्ग गर्नेहरुलाई त हामीले अहिलेसम्म केहि भनेका छैनौं भने अर्जुन क्षेत्रीले त भूकम्प आउँछ, पानी पर्छ, बाढी आउँछ भनेको त हो नि । यो बर्षा याममा बाढी आउने कुरा किन अर्जुन क्षेत्रीले भन्नुपर्छ र त्यो त ‘मेरो सरकार’लाई पनि थाहा छ नि !
अब विप्लव नेतृत्वको पार्टी वा समूहको कुरा गरौं । मेरो प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको कुरा मान्ने हो भने यो त झन ठूलो कुरो नै होईन । प्रतिबन्ध लगाउने बेलैमा गृहमन्त्री ज्युले भन्नुभएको थियो नी ‘नलाई मैले चिनेको र बुझेको छु, त्यति जटील होइन’ भनेर । अनि प्रधानमन्त्री ज्युले त झन कम्युनिष्टको नाम बेचेर हिँड्ने लुटेराको समूह भनेर त्यतिबेलै भन्नुभएको हो नि । त्यसैले लुटेराको समूहसँग किन त्यति धेरै आतंकित हुनुपर्छ र प्रधानमन्त्री ज्यु ?
तसर्थ, ‘मेरो सरकार’लाई यति कुरा ख्याल हुनुपर्‍यो कि त प्रतिक्रिया दिनेबेलामा सोंचेर दिने गरौं कि काम गर्ने बेलामा ढङ्ग पुर्‍याऊ । जनताले सँधै सरकार र विद्रोहीको दोहोरी, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको रेस्लिङ्ग अनि ज्योतिष र नेताको बेमौसमी बोली मात्रै सुनेर बस्नुपर्ने देखियो । त्यसैले सरकारको नेतृत्व होस वा पार्टीको नेता, ज्योतिष होस् वा विद्रोही जनतालाई आतंकित बनाउन छाडेर समृद्धि यात्रामा हातेमालो गर्ने बारेमा सोचे हुन्न र ?